Akhriso qorshaha madaxweyne xaaf iyo arimaha doorashooyinka galmudug | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Akhriso qorshaha madaxweyne xaaf iyo arimaha doorashooyinka galmudug
Akhriso qorshaha madaxweyne xaaf iyo arimaha doorashooyinka galmudug
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku baaqay in la joojiyo dhamaan howlaha ka socda Magaalada Dhuusamareeb, beelaha Galmudugna iskugu yimaadaan shir cusub oo dib u heshiisiineed.
Hadalka Xaaf ayaa yimid ka dib markii guddigii doorashada Madaxweynaha Galmudug ee uu ansixiyey baarlamanka Galmudug ay u kala jabeen labo garab, ayna ahlu suna qaadacday doorashada Madaxweynaha Galmudug, iyagoo ku eedeeyey DF iney doorashada afduubteen.
Xaaf ayaa sidoo kale u soo jeediyey dhamaan dhinacyada Galmudug, sida siyaasiyiinta, odayaasha dhaqanka iyo hogaanka Ahlu sunna iney isaga uga dambeeyaan arrimaha Maamul dhisida Galmudug.
Madaxweyne Xaaf oo ka baxay heshiiskii uu la galay DF ayaa magaalada Gaalkacyo ka wada dhismaha maamul kale oo Galmudug, wuxuu magacaabay xildhibaano, isagoo halkaas ka abaabulaya doorasho uu doonayo inuu isku caleemo saaro mar kale.
HOOS KA AKHRISO QORAALKA XAAF OO DHAMEYSTIRAN
Previous articleAkhriso ahlusunna oo garab waydiisatay madaxweyne xaaf kadib markii….
Next articleAkhriso beelaha galmudug ,cadaadiska dowlada Somalia ay ku hyso iyo sida Xildhibanada galmudug